jeudi, 20 février 2020 21:28
Arabia Saodita: Hamatsy vola 20 tapitrisa dolara hanamboarana ny tetezan’i Mangoky
Vita ny fifanaovan-tsonia savaranonando ny famatsiam-bola mitentina 20 tapitrisa dolara avy amin’ny Tahiry Saodiana ho an’ny Fampandrosoana hanamboarana ny tetezan’i Mangoky. Nanatanteraka izany tao Riyad renivohitra ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola malagasy Randriamandrato Richard, niaraka tamin’ny filoha tale jeneraly lefitry ny Tahiry Saodiana ho an’ny Fampandrosoana, Dr Khalid S. Alkhudairy sy ny filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny Banky Arabo ho an’ny fampandrosoana ara-toekarena an’i Afrika (BADEA).
Hirefy 880m ity tetezana hamboarina ity, ao amin’ny PK 199+700 manaraka ny lalam-pirenena faha-9. Ankoatra ny tetezana dia voakasik’ity tetikasa ity ny fanamboarana lalan-tany mirefy 10km, fanorenana tobin’ny Zandary, fanaovana vovo ho famatsiana rano, ary koa sekoly sy toeram-pitsaboana.
jeudi, 20 février 2020 21:20
Vohémar: Vary simba milanja 106 taonina hodorana nisy naka an-tsokosoko hamidy
Vary lany daty, efa simba, efatra kaontenera milanja 106 taonina, efa hodorana no noloaran’ny olona tao Antsimalao, ary misy nanaparitaka hamidy any amin’ny Kaominina Ampondra sy ny manodidina, ato anatin’ny Distrikan’i Vohémar.
Vantany vao nahazo fampandrenesana ny fisian’izany ny manampahefana teto Vohémar dia nidina ifotony nampahafantatra ny Vahoaka fa tsy azo hoanina ny vary fa efa lany daty ka misy poizina satria efa norarahana lasantsy ihany koa ireo vary vao nodorana.
jeudi, 20 février 2020 21:10
Zaza kamboty zanaka miaramila: Nampirisika azy ireo hilofo amin'ny fianarana ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena
Tonga teny Antsahasoa Iavoloha, Antananarivo Atsimondrano, toerana misy ny Akany fitaizana zaza kamboty, zanaky ny miaramila lavo teo am-panatanterahana iraka, androany alakamisy 20 febroary, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard.
Nankahery ny ankizy ary nitondra fitaovam-pianarana, sy ireo kojakoja mety ilain'izy ireo, ankoatran'ny kilalao ny minisitra. Nampirisika azy ireo hilofo hatrany amin'ny fianarana ihany koa izy, ary nisaotra ihany koa an'ireo mpanabe eo anivon'io toerana io ny tenany, ary nanolotra fitaovana hoentina manampy azy ireo amin'ny andavanandron'ny Akany.
Niondrika tamin’ny isa 4 noho 5 i Madagasikara nanoloana an’i Barheïn androany tamin’ny lalao faharoa natrehiny amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabe U20 » tanterahina any Arabia Saodita ny 17 febroary ka hatramin’ny 5 martsa 2020.
I Bahreïn no nisantatra ny fampidiram-baolina tamin’ity lalao ity. Nitarika 2 noho 0 izy ireo, vao nifoha ny Malagasy, ary nahavita nanao sahala 2 noho 2. 3 noho 2 ny isa nentin’ny ekipa roa tonta niala sasatra, nanantombo i Bahreïn.
Nahavita nampitsibadika ny isa ny Barea ka nitarika 4 noho 3 teo amin’ny minitra faha-59, taorian’ny matin’i Raicardo. Nanararaotra ny lesoka tao amin’ny mpiandry harato Malagasy ry zareo Bahreïn ka nahatafiditra baolina roa tao anatin’ny 8 minitra. 5 noho 4 ny isa teo amin’ny minitra faha-67, nanatombo i Bahreïn, io koa no isa nisarahan’ny roa tonta.
jeudi, 20 février 2020 20:51
Toliara: Nidoboka am-ponja ireo fito lahy voarohirohy amin’ny halatra taova
Nahatrarana voamaso efa maina izay tena voamarina fa voamason'olom-belona ny tranon'ny iray amin’izy fito lahy ireo rehefa nosavain’ny mpitandro ny filaminana, araka ny fanazavan’ny Talem-paritry ny Filaminam-bahoaka Faritra Atsimo-Andrefana.
Naiditra am-pondra vonjimaika eto Toliara izy fito voarohirohy amin’ny halatra taova ireo taorian’ny famotorana izay natao azy ireo.
jeudi, 20 février 2020 20:11
Polisim-pirenena: Ny Commissaire divisionnaire de Police Randriambelo Aina no Talen'ny kabinetra vaovao
Tontosa androany alakamisy 20 febroary 2020, teo Anosy, ny fifamindram-pitantanana teo amin’ny Commissaire Divisionnaire de Police Ainanirina Albert Estel, Talen'ny Kabinetra ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka teo aloha, sy ny Commissaire Divisionnaire de Police Randriambelo Mandimbin’Ny Aina Mbolanoro handimby toerana azy.
Isany fanamby apetrak'ity farany ny fanatanterahana ny asany am-pahamarinana, ary koa ny fitandroana mandrakariva ny fahamendrehana takian’ny maha mpiasam-panjakana azy.
jeudi, 20 février 2020 20:08
Jean-Yves Le Drian: Nigadona teny Ivato io tolakandro io
Manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara ny lehiben'ny diplaomasia frantsay Jean-Yves Le Drian. Manomboka androany, ary haharitra roa andro.
Ny tolakandro teo no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ity minisitra frantsay ity. Nitsena azy teo ampahatongavana ny Minisitry ny raharaham-bahiny malagasy Tehindrazanarivelo Liva.
Anio hariva ihany dia horaisin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina eny Iavoloha i Jean-Yves Le Drian.
Votoatin'ny diany eto ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'i Madagasikara sy Frantsa.
Hiatrika ny lalaony faharoa amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena « Coupe Arabo U20 » atao any Arabia Saodita i Madagasikara anio. Hifanandrina amin’i Barhein ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra latsaky ny 20 taona, anio amin’ny 6ora hariva, ora eto Madagasikara.
Nandresy an’i Djibouti tamin’ny isa 4 noho 3 i Madagasikara tamin’ny lalao voalohany natrehiny ny alatsinainy lasa teo.
Hatreto dia tsy mbola misy tranga « coronavirus » any Rwanda. Na izany aza, nesorin’ny filoha Paul Kagame avy hatrany tamin’ny asany ny minisitry ny fahasalama Diane Gashumba noho ity farany « nandainga » sy nanao tsirambina ity valanaretina ity, satria tsy ampy akory ireo fitaovana fitiliana ananan’i Rwanda amin’ny fisorohana tokony hatao.
Nanomboka ny taona 2016 i Diane Gashumba no nisahana ny ministeran’ny fahasalamana tao Rwanda.
Maherin’ny 2 100 izao ny olona matin’ny coronavirus any Chine hatramin'ity androany ity. Nisy roa hafa maty tany Iran, roa koa tany Hong Kong, ary roa hafa mpizahatany japoney, isan’ireo narahimaso ara-pahasalamana tao anatin’ilay sambobe « Diamond Princess ».
jeudi, 20 février 2020 14:10
Antenimieram-pirenena: Mitaraina ny « Assistant parlementaire » sasany fa 100 000 Ar no mba tambinkaramany
Misy andiana « Assistant parlementaire », mpiara-miasa akaiky amina solombavambahoaka, mitaraina fa 100 000 Ar no mba tambinkarama omen’ny depiote azy ireo, raha tokony 460 000 Ariary izany.
Araka ny fitsipika anatin’ny Antenimieram-pirenena dia zon’ny depiote tsotra ny hanana « Conseiller technique » iray, « Assistant technique » iray ary « Assistant parlementaire » miisa dimy amin’ny fanatanterahana ny asany.
Mandalo eo ampelan-tanan’ny solombavambahoaka isanisany ny tambinkarama omena ireo mpiara-miasa akaiky aminy ireo. Noho io fitarainan’ireto andiana « Assistant parlementaire » ireto dia heno fa mety haloa amin’ny alalan’ny « Bon de caisse ».